PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-10-28 - UMQEQESHI WE-STARS UKHALA NGESIHLUKU SE-PSL
UMQEQESHI WE-STARS UKHALA NGESIHLUKU SE-PSL
Ilanga langeSonto - 2018-10-28 - Ezemidlalo - SENZO SOKHELA
UKHALA ngesihluku esenziwa yipremier Soccer League (PSL) kwezakhe uluc Eymael ( osesithombeni) ongumqeqeshi wefree State Stars ezobhekana neblack Leopards kowe-absa Premiership namuhla ngesonto ngo-15h30 ethohoyandou Stadium, elimpopo.
Istars izokuya kulo mdlalo nje, ibinomunye umdlalo weligi ngoLwesithathu ebusuku lapho ibambane khona nelamontville Golden Arrows kuba ngu-1-1 egoble Park, ebethlehem.
U-eymael uthi namanje usazibuza kodwa akayitholi impendulo ukuthi kungani IPSL ihlukumeza abadlali bakhe ngalolu hlobo.
“Yithina kuphela esibe nomdlalo ngolwesithathu, okulandelayo lapho sesizokuba nomdlalo osenkundleni ekude, esizohamba amahora ngamahora emgwaqweni sihleli ebhasini. Iyisihluku le nto eyenziwe yiligi kithina kodwa-ke inezizathu zayo.
Kanginankinga nokuthi besidlala (ngolwesithathu) okungikhalisa kakhulu wukuthi bekufanele sicatshangelwe.
“Phela lolu hambo esizokuba nalo lude ngempela, ukuba bekuseduzane besingeke sibe nankinga. Kodwa-ke sizozama yize ngikholwa wukuthi ileopards inethuba elingcono kunelethu njengoba ibe nesikhathi esanele sokuphumula,” kusho u-eymael.
Ujoel Masutha ololonga ileopards, uthi istars izofika beyilindele.
“Izinkinga ebesinazo emuva ngikholwa wukuthi sizamile ukuzixazulula, kasikhali ngalutho. Inkinga-ke wukuthi ufike ulungise izinto ejimini bese zibuya zonke futhi uma sekufikwa emdlalweni.
"Ngimincile nje ukuthi ingenzeki le nto ngoba sizokuba nenkinga njengoba istars inabagadli abanamandla ikakhulukazi emoyeni. Kodwa-ke izosifica siyihlomele siyizingovolo,” kusho umasutha.
Kweminye imidlalo ye-absa Premiership, isupersport United izobhekana ne-arrows namuhla ngesonto ngo-15h30 embombela Stadium, empumalanga, kuthi ibloemfontein Celtic ishukane nebaroka FC namuhla ngesonto ngo-15h30 edr Molemela Stadium, efree State.